Ministries yemachechi aKristu
Ndinokutendai nekushanyira peji yedu ye Ministries yemachechi aKristu. Iyi peji yakasikwa kuitira kubatsira vaKristu vose nevaya vanoda kutsvaka zvakawanda nezvaIshe. Kana iwe uchida kupinda mune rumwe rudzi rweushumiri, tinokukurudzira kuti utaure chero humwe hwehutariri idzi kuti uwane mamwe mashoko.
PaMenu Menu yakanyorwa pamusoro apa unogona kuvhara pane chero humwe hutano hunowanikwa pa "Ministries" tab kuti uwane mazita ehurumende.
Iyo mufaro uye chikomborero kushumira machechi aKristu uye pasi rese paIndaneti nemashoko akanaka aJesu Kristu Ishe. Tinotarisira kukushandirai. Dai nyasha dzaMwari, rudo rwaJesu, uye nerunyararo rweMweya Mutsvene zvive newe nemhuri yako nokusingaperi.
Chechi yako kana ushumiri inoda webhusaiti here?
Tinogona kubatsira. Yedu paIndaneti Website Builder iri nyore kushandisa uye yakasununguka kushandiswa neipi yebhadharo yedu yekubhadharira web webhu. Kana zvichidiwa tinokwanisa kugadzira webhusaiti yehutaneti pabhadhari dzakaderera. Click pano kana paIndaneti logo pane mamwe mashoko.